Kuwani waa noocyada dharka raaxada ugu fiican ee ragga | Niman qurux badan
Qolka Ignatius | | nololeedka
Yaa kale iyo yaa ka yar, wuxuu jecel yahay inuu si fiican u labbisto, ugu yaraan haddii aan jecelnahay in aan yeelanno bilicda sida ay tahay qofnimadayada. In si fiican loo labbisto macnaheedu maaha inaad maal badan ku bixiso dharka, dhadhan yar oo keliya ayaa kugu filan. Si kastaba ha noqotee, haddii jeebkaagu kuu ogolaado, waxaad sidoo kale iibsan kartaa dhar qaali ah.
Hadday sidaas tahay, markaa waanu ku tusinaynaa noocyada dharka raaxada ugu fiican, noocyada soo saara khadadka dharka cusub sanad walba, kuwaas oo, waxaan dhihi karnaa, waligood ma baxaan qaabka, inkastoo mararka qaarkood.
Shirkadda Hermés waxaa la aasaasay 1837 magaalada Paris waxaana aasaasay Thierry Hermès, maantana waa mid ka mid ah shirkadaha moodada ugu da'da weyn aduunka. Markii hore waxay samayn jireen sariiro fardaha lagu xidho (sidaa awgeed calaamadahoodu waa gaadhifardoodka) iyo, in kasta oo lagu yaqaan bacaha iyo cumaamado, waxay sidoo kale leedahay qalabyo kala duwan oo kala duwan sida boorsada, xarkaha saacadaha smart.
Moodeelka bacda Birkin waxa uu ahaa gabalkiisii ​​ugu quruxda badnaa tan iyo 1984-kii, maantana waa tan loogu doonista badan yahay adduunka oo dhan oo leh liis sugitaanno dheer. Waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin in aysan ahayn maqaal caadi ah oo kaliya dhowr xubnood oo ka mid ah akhyaarta waxay awoodaan inay mid yeeshaan.
Louis Vuitton waxaa la aasaasay 1854-kii, waxaana aasaasay Louis Vuitton Malletier, oo magaceeda la soo gaabiyo LV ayaa laga gudbay. Inkasta oo markii hore ay hawsheeda diiradda saartay alaabada safarka (Filimta James Bond ee 60-meeyadii iyo 70-meeyadii, jirridda halyeeyada iyo shandadaha naqshadeeye ayaa ka muuqda) sidoo kale waxay leedahay joogitaan muhiim ah adduunka moodada iyo qalabka raaxada.
Inkastoo bacaha ay hadda jiraan mid ka mid ah alaabteeda ugu caansan, sanad walba waxay soo saartaa khad cusub oo dhar ah oo loogu talagalay dadka ugu qanisan, oo ay weheliyaan qalabyo kala duwan oo nooc kasta ah. Dhaqan ahaan, badeecadaha soo saarahan ayaa had iyo jeer ka mid ah kuwa ugu been abuurka badan adduunka.
Waxaa weheliya Hermés, mid kale oo ka mid ah shirkadaha moodooyinka ugu caansan ee caanka ah waa Chanel, shirkad Waxaa aasaasay Coco Chanel sanadkii 1910. Alaabooyinkeeda ayaa had iyo jeer la xidhiidha raaxada, iyo, kaliya maaha inay na siiso alaabta dharka, laakiin sidoo kale waxay soo gashay adduunka cadarka ee Chanel No. 5 oo ay caan ku tahay atariishada Marilyn Monroe.
Laakiin, marka lagu daro, waxay sidoo kale leedahay iJoogitaanka muhiimka ah ee adduunka qurxinta, bacaha, saacadaha, muraayadaha, kabaha iyo gaar ahaan haute couture, oo ay weligeed ka mid ahayd shirkadaha loogu ammaano badan yahay, wax-soo-saarkeeduna waa kuwa loogu doonista badan yahay, iyada oo aan loo eegin muddada ay suuqa ku jireen.
Mahadsanid garaadka Karl Lagerfeld, wuxuu badbaadiyay guriga 1983 markii uu noqday madaxa naqshadeeyaha sumadda ilaa dhimashadiisa 2019.
Dior, a inta badan summada raaxada dumarka, waxaa lagu aasaasay Paris 1946-kii oo uu sameeyay naqshadeeyaha fashion Christian Dior waxaana hadda iska leh kooxda Arnault (oo ka tirsan kooxda Louis Vuitton).
Iyada oo lagu qiyaasay qiimaha sumadda $ 11.900 bilyan, waa mid ka mid ah nashqado qaali ah oo qaali ah ee warshadaha moodada. Inkasta oo asal ahaan loo qoondeeyay oo kaliya dharka dumarka, mudooyinkii ugu dambeeyay waxa sidoo kale lagu soo bandhigay dharka ragga.
Dior soo saara saacadaha, waxyaalaha la isku qurxiyo, udgoonka, dharka, alaabta maqaarka, kabaha ciyaaraha iyo alaabooyinka kale ee moodada oo dejinaya isbeddellada.
Fendi waa astaanta moodada Talyaaniga ee ka timid ugu qaalisan suuqa la Dior waxayna aad caan ugu tahay dadka caanka ah ee waqtigan.
Astaantu waxay caan ku tahay alaabta dhogorta, Kabaha naqshadeeye, dharka, alaabta maqaarka, saacadaha iyo muraayadaha. Nashqadaha moodada iyo xarrago leh ee naqshadeeyaha ayaa ka dhigay mid aad loo jecel yahay sanadihii ugu dambeeyay.
Waxaa la aasaasay 1913 by Mario Prada ee Milan, Italy. Prada waa mid ka mid ah kuwan summadaha haute couture ee ugu horreeya adduunka kaas oo bixiya dhar, dhar, boorsooyin iyo waxyaabo qaali ah oo lagu sameeyay farsamooyinka farsamada ugu fiican, iyadoo la isticmaalayo qalab tayo sare leh.
Astaanta Prada waxay bixisaa alaabta maqaarka, dharka iyo kabaha ragga iyo dumarka, isku darka naqshad casri ah, mid cusub iyo mid casri ah oo leh mid ka mid ah alaabooyinka farsamada gacanta, laakiin, marka lagu daro, waxaan sidoo kale ka heli karnaa alaabtooda qaybaha kale sida muraayadaha iyo cadarka.
Noocaan raaxada ah ayaa caan ku ah nashqado casri ah laakiin heersare ah oo qurux badan, kuwaas oo caan ku ah dadka dabaqada ganacsiga. Astaantu waxay la xiriirtaa soo saarista alaabooyin kala duwan sida dharka, kabaha, bacaha maqaarka, cadarka iyo agabyada.
Dharka quruxda badan ee Prada, midabada aasaasiga ah iyo kuwa nadiifka ah, naqshadaha heersare ah ayaa ka dhigaya a mid ka mid ah noocyada moodooyinka ugu qaalisan uguna qaalisan adduunka moodada.
Waxaa la aasaasay 1967-kii oo uu aasaasay naqshadeeyaha moodada Ralph Rueben Lifshitz ee magaalada New York, Ralph Lauren waa mid ka mid ah Inta badan Astaamaha American Haute Couture Brands ee Ameerika.
Xiisaha leh: Nashqadeeyaha moodada Mareykanka Virgil Abloh wuxuu iibsaday qaar ka mid ah shaararka flannel Ralph Lauren $ 40 midkiiba wuxuuna si fudud ugu daabacay ereyga "Pyrex" iyo lambarka 23, ka hor inta aanad ku iibin $550 midkiiba.
Gianni Versace wuxuu ahaa aasaasaha astaanta caanka ah ee Talyaaniga ee 1978 ee Milan kaas oo helay xitaa caan ka badan 1997, markii waa la dilay. Walaasheed Donatella waxa ay la wareegtay meheradda qoyska ilaa iyo hadda, wayna sharfaysay iyada oo ku guulaysatay in ay qaab ahaan u ilaaliso dhaxalka walaalkeed.
Versace waa astaan ​​qaali ah oo asal ahaan Talyaani ah wuxuu ku raaxaystaa sumcad weyn oo ka dhex jirta dadka caanka ah. Shirkadda waxaa loo arkaa inay tahay mid wax ka beddeleysa warshadaha moodada waxayna caan ku tahay dharka aadka u sarreeya ee indhaha soo jiidanaya.
Guriga moodada raaxada ayaa la xidhiidha alaabta maqaarka, muraayadaha indhaha, diyaar u ah in la xidho iyo qalabyada. Daabacaada xad dhaafka ah iyo midabada firfircoon ayaa ka caawiyay Versace inay soo bandhigto naqshado moodo cusub oo ay aad u jecel yihiin iibsadayaashooda oo si cad u dhiirigeliyay shirkadaha kale sida Zara, H & M ...
Shirkadda Talyaaniga ee Gucci waxaa la aasaasay 1921-kii Guccio Gucci, waxay ku taallaa Florence iyo hadda. iibiya dhammaan noocyada alaabooyinka iyo qalabyada labbiska sida dharka, kabaha, dahabka, bacaha, saacadaha, cadarka.
Dhamaadka sanadka 2021, filim gucci, filim ka sheekeynaya dilkii Maurizio Gucci, awow iyo dhaxalka boqortooyadii Guccio Gucci.
Tom Ford, Frida Giannini iyo Alessandro Michele oo leh qaar ka mid ah naqshadeeyayaasha waaweyn ee u shaqeeyay astaantan. Waqtigan xaadirka ah, Gucci waxaa iska leh oo ay maamusho shirkadda raaxada ee Faransiiska Kering, halkaas oo shirkadaha kale ee raaxada sida Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Girard-Perregaux iyo kuwo kale ay ku yaalliin.
Balenciaga waa dukaanka dharka qaaliga ah ee fadhigiisu yahay Paris, waxaana aasaasay 1917 nashqadeeyaha Isbaanishka Cristobal Balenciaga, kaasoo dhiirigeliyay Dior oo isaga ugu yeedhay sayidkeenna dhammaanteen.
ka millennials dareen hodan ah aad u soo jiitay Balenciaga nashqadaha qallafsan iyo kuwa isbeddelka ku socda, gaar ahaan kabihiisa orodka. Qaybaha moodada Balenciaga waxaa ka mid ah dharka, kabaha iyo boorsooyinka.
Waxaa la aasaasay 1975 Giorgio Armani ee Milan, ka dib ka baro ganacsiga goobta shaqada ee Nino Cerruti, Armani waxa uu nakhshadeeyaa, soo saaraa oo iibiyaa alaabada qaaliga ah ee couture iyo hab-nololeedka.
Bixinta dharka, qalabka, muraayadaha, saacadaha, dahabka, udgoonka iyo waxyaalaha la isku qurxiyo iyo alaabta daryeelka maqaarka ee hoos yimaada noocyada kala duwan sida Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Beauty iyo A/X Armani Exchange.
Salvatore Ferragamo waxay la mid tahay farsamada gacanta, shirkad ku bilaabatay shirkad kabo. Hadda waxa uu ku takhasusay Swiss waxay samaysay kabo, alaab harag ah, saacado iyo diyaar u ah inay xidhaan ragga iyo dumarka.
Shirkaddu waxay soo saartaa kabaha ugu gaarka ah waxayna wax weyn ku soo kordhisay warshadaha moodada oo leh hal-abuuro caan ah sida ciribta cidhibta, cidhibta birta iyo kabolada, kabo qolof leh, kabo aan muuqan, ka Kabo dahab ah oo 18-carat ah, kabo-sock, cidhibta farshaxan iyo kuwa kale.
Tom Ford waa shirkaddii ugu dambeysay ee moodada moodada ee isku dubaridan, kaaso la sameeyay 2005tii waxaa sameeyay nashqadeeyaha moodada Tom Ford. ka dib markii uu ka tagay booskiisii ​​hore ee agaasimaha hal-abuurka ee Gucci.
Si kastaba ha ahaatee, inkastoo ay tahay astaanta cusub ee raaxada, waxay u suurtagashay la tartamo naqshadeeyaha duugga ah ee warshadaha muddo gaaban gudahood.
Laga soo bilaabo dharka u diyaarsan in la xidho ilaa nin iyo naag leh naqshado gaar ah Kabaha, muraayadaha, shandadadaha gacanta, alaabta hargaha ah, waxyaalaha la isku qurxiyo, alaabta daryeelka maqaarka, iyo cadarka.
Olivia Wilde, Rihana, Emma Stone, Zhang Ziyi, Eva Green, Michelle Obama iyo Jennifer Lawrence… waa qaar ka mid ah dadka caanka ah ee ka soo muuqday iyagoo xidhan lebbiska Tom Ford oo qaab ciyaareed heersare ah soo bandhigay, gaar ahaan xafladaha abaal-marinnada la xidhiidha warshadaha filimada iyo muusigga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Kuwani waa noocyada dharka raaxada ee ugu fiican ee ragga